Amalungu e-Airbnb - Airbnb
Khokhelwa ngokuxoxela abanye ngothando lwakho lokuvakasha
Joyina uhlelo lwaBalingani be-Airbnb futhi wenze imali lapho ukhangisa ngezindawo zokuhlala ze-Airbnb nokokuzithokozisa. Imigomo iyasebenza
Sungula amalinki noma amawijethi aqokiwe esayithi yakho, noma usebenzise amathempulethi ethu ukuze wakhe amakhasi akho okuhamba—akudingeki i-HTML.
Yabelana nabantu ovame ukuxhumana nabo
Phromotha izindawo zokuhlala nezinto ongazenza ngokwabelana nabanye okuqukethwe kwalabo obambisene nabo kuwebhusayithi yakho noma ku-akhawunti yenkundla yezokuxhumana.
Qala wenze imali
Lapho othile ebhukha ku-Airbnb ngezinto azibone ekhasini lakho, uzothola u-30% wemali yezivakashi se-Airbnb ngokuhlala okuphothuliwe kanye no-25% wemali yombungazi we-Airbnb ngokokuzithokozisa okuphothuliwe. Funda kabanzi
Indlela yokwabelana ngokuqukethwe
Yenza amalinki okuzenzela ezindawo zokuhlala noma okokuzithokozisa ofuna ukukutusa.
Faka amawijethi owahlele ngendlela yakho esayithini yakho ezindlini ezithile noma kumabhokisi okusesha.
Yakha amakhasi ohambo
Khetha kumathempulethi aklanywe ngokucatshangisisiwe ukuze wakhe awakho amakhasi.
Yiba phambili ngamathempulethi
Yenza iqoqo lezinto ozibone usohambweni elivumelana nendlela okhetha ukuxhumana ngayo nabantu ovame ukuxhumana nabo. Hlela ngendlela yakho, shicilela futhi ulawule iqoqo lezinto ozibone usohambweni ngamathuluzi okuhlela akhelwe ngaphakathi.
Sebenzisa ibalazwe ukuze ubonise izindawo zokuhlala nokokuzithokozisa okuseduze nendawo ethandwayo.
Xoxela abanye ngezindawo zokuhlala nokokuzithokozisa okubhukhile noma okugcinile ngenkathi ubhrawuza.
Ibhokisi lokusesha le-Airbnb
Benzele lula abantu ovame ukuxhumana nabo ukuba baziseshele bona.
Noma ngabe ungumuntu onethonya, umbungazi we-Airbnb, usebenza ngaphansi kwe-brand ethile, noma umane nje uthanda ukuxoxa ngamathuba okuthatha uhambo angelibaleke, kungenzeka nguwena ongena khaxa.
Wenza izindawo zokuvakashelwa ezithandwayo zizwakale njengezintsha. Oxhumana nabo ezinkundleni zokuxhumana bahlezi belindele ozokuphosta, ama-like akho nezinto okhuluma ngazo.
Enhliziyweni uyivulandlela futhi unesiphiwo sokuxoxa izindaba, uthanda ukuxoxela abanye ngezinto ozibone kuwo wonke umhlaba.
Ubuchwepheshe benu busiza abantu abavela kuwo wonke umhlaba bathole amathuba angenakulibaleka okuthatha uhambo.
Wazi ngaphezu kwanoma ngubani ukuthi yini eyenza i-Airbnb ikhetheke futhi kusegazini kuwe ukusiza izihambi zilujabulele ngokugcwele uhambo.
Bheka lezi zimpendulo zemibuzo evamile futhi uhlole imininingwane yohlelo ku-Help Center.
Kuthiwani uma othile ebhukha ukuhlala noma okokuzithokozisa okungekona lokhu ebengikuphromotha?
Uzothola imali nganoma yikuphi ukubhukha okufanelekayo okwenziwe yisivakashi, inqobo nje uma isivakashi size ku-Airbnb ngelinki yakho futhi sifeza eminye imibandela yohlelo.
Kufanele kuthathe isikhathi esingakanani ngothile ukuba abhukhe ngemva kokuchofoza okuqukethwe ekhasini lami?
Kuzodingeka babhukhe phakathi nezinsuku ezingu-28 ngokuhlala kanye nezinsuku ezingu-14 ngokokuzithokozisa ukuze uthole imali yesikweletu ngokubhukha. Uzohola uma sebeqede ukuhlala kwabo noma okokuzithokozisa.
Kwenzekani uma othile ebhukha ngemva kokuchofoza okuqukethwe emakhasini ahlukahlukene abalingani be-Airbnb?
Ilinki yokugcina yomlingani isivakashi esiyichofozayo ngaphambi kokubhukha kuzoba yiyona ethola imali yesikweletu.
Njengoba ngingumbungazi we-Airbnb, ngingakwazi yini ukuthola imali yesikweletu ngokuhlala kanye nokokuzithokozisa engikuqondisayo?
Ababungazi be-Airbnb bangathola imali yesikweletu ngokwabelana ngokokuzithokozisa nezindawo zokuhlala, kuhlanganise nokubhukhwa kwezindawo zokuhlala nokokuzithokozisa okusendlini yabo.
Lizoba yini iholo lami?
Njengoba ungumlingani, uzokhokhelwa u-30% wemali yesivakashi se-Airbnb njalo lapho othile ebhukha futhi ephothula ukuhlala akususele kulokho akubone ekhasini lakho, futhi uzokhokhelwa u-25% wemali yombungazi we-Airbnb njalo lapho othile ebhukha futhi ephothula okokuzithokozisa (kuyi-inthanethi noma mathupha) ngokususelwa kulokho akubone ekhasini lakho. Bheka i-help center kanye nemigomo yemibandela eyengeziwe.
Usukulungele ukuqala ukuhola njengoMlingani we-Airbnb?